Seho tsiaro an’I Fafah :: Tsy nahatazona ranomaso teny an-tsehatra i Dadah (Mahaleo) • AoRaha
Seho tsiaro an’I Fafah Tsy nahatazona ranomaso teny an-tsehatra i Dadah (Mahaleo)
Ny fon’ny mpijery mihitsy no voakitika nandritra an’ilay fampisehoana “Ny Fihavananay” niarahan’i Dadah sy Farakely ary i Ony Rakotomalala, tetsy amin’ny Plaza Ampefiloha, tamin’ny alin’ny zoma teo. Ranomaso, sentosento, tehaka, fihobiana, hirahira…izany no azo amintinana an’izany seho natao hahatsiarovana an’i Fafah izany.
I Dadah no namaky lay ny lanonana. Mbola hita soritra teny amin’ny endriny ny alahelo noho ny nahalasana an’i Fafah, mpiray tarika aminy ao amin’ny Mahaleo, herinandro lasa izay. Tsy zakany ny vesatry ny tsiaro tao anatiny, ka vaky nitomany ity mpanakanto ity teo am-pihirana an’ireo vazo fanaony niaraka tamin’ilay sakaiza tsy foiny eny an-tsehatra. “Olona tena tsotra i Fafah”, hoy i Dadah tamin’ny feo malahelo sady latsa-dranomaso.
Nampihetsi-po ny rehetra ihany koa ny kalo nandrenesana ny feon’i Fafah, izay niangalian’i Farakely sy Ony Rakotomalala. Nisy ny fampiaraham-peo teo amin’ izy telo mianadahy mianaka. Anisan’ny nahazo lamako nirefodrefotra avy amin’ny mpanatrika ny nanaovan-dry zareo ny “Rafahafahana”.
Nentanim-po ny iray efitrano ka nanaraka ny hira rehetra niainga teny an-tsehatra. Toa hoe faly kanefa malahelo, na ireo mpanakanto teny ambony lampihazo na ny mpijery teny am-pitoerana.
Na teo aza izany rehetra izany dia niezaka ny nampi-tsiky ireo olona maro tonga nanotrona ny “Ny Fihavananay” i Dadah. Nolaroin’ity mpanakanto ity resadresaka miendrika ha-tsikana mantsy ny fiarahana, isaky ny vita ny hira iray. Zary resaka nifanaovan’i Dadah tamin’ny mpanatrika ny hanihany kely nataony teny an-tsefatsefany teny.
« Haify mampihavana » :: Navitrika ireo ankizy nifaninana tamin’ny “Tsikonina”
Zavakanto an-tanàn-dehibe :: Hifangaro etsy Ampasani­malo ny kanto marolafy